रिसले फुलेकी साहुनीको पसल – Newsrekha
न्यूजरेखा । १८ श्रावण २०७८, सोमबार ११:०३ बजे
आफैं त उत्तर हिमालदेखि दक्षिण महाभारतसम्मै तन्किएको लाम्चो धादिङ। सदरमुकाम धादिङबेशी उस्तै लाम्चो। तीन किलोमिटरजति लामो बजारमा तीनै खण्ड छन्। सिरान बजार। बीच बजार। र, पुछार बजार। मूल सडकमा रहेका तीन-चार वटा चोकबाट दायाँबायाँ दुवैतिर अरू बजार फैलिँदै छन्। ती बजार र जिल्लाका अन्य ठाउँका पसलको अनुगमन गर्ने टोली दुई महिनादेखि निरन्तर फन्को मारिरहेछ।
छिमेककी साहुनी, ‘के काम हो?’
‘यो पसलको साहु बाहिर गएको भएर हेरिदिएको।’
‘अरूको पसल हेर्नु हुँदो रहेछ, आउनुस् तपाईंकै पसल हेरौं’ भनेर बोलाउँदा ड्रेसमै भएका, आइडी भिरेका टोलीलाई बेवास्ता गर्दै नमज्जैले झर्किएर भनिन्, ‘त्यही त हो नि पसल। हेर्नु न। तपाईंहरू जहिल्यै बन्द हुने बेला आउने। दुःख दिने।’
‘भर्खर खोलेको पसल। साइनबोर्ड बनाउन दिएको छ।’
‘३ वर्षजति भयो।’
पोहोर साल। सुनौला बजार। एकजना यिनै साहुनीजस्ता रूखा साहुजी टोलीलाई भन्दैछन्, ‘अनुगमन भन्या छ। सरकारी गाडी चढ्या छ। बिदाको दिन सरकारी तेल सक्या छ। घुम्या छ। भत्ता पाएको छ। मासुभात खाएको छ। व्यवसायीलाई दुःख दिएको छ।’
‘कुहिएको निकालेर बुंगुरलाई खुवाउने हो।’
विशालले भित्रैबाट चाउचाउको कार्टुन खत्र्याक्क सडक पेटीमा हुर्‍याएसँगै पेटी र पसलको जोड-घटाउ सुरू हुन्छ। झोकमा फ्याँकेको होइन, ‘एक्सपायर’ सामान छुट्याएर भित्र राख्ने ठाउँ नपुगेर। सामानहरू पसलबाट घट्दै पेटीमा थपिँदै जान्छन्।
अघिदेखि फुल्दै गएकी साहुनी यहाँनिर ‘फुलनदेवी’ हुन्छिन्, ‘यत्रो सामान लगेर पुगेन? अझ केको जरिवाना? तिर्दिनँ।’
चोकमा ड्युटी खटिएका हवलदार र महिला प्रहरीलाई बोलाइन्छ, ‘यस्तो लापरबाही रहेछ यो पसलमा, तपाईंहरूले ध्यान दिनुपर्‍यो।’
महिला प्रहरी भन्छिन्, ‘सर यो पसलले हामीलाई त टेरपुच्छर लाउँदैनथ्यो। हामी वाक्कै भइसकेका थियौं। सशस्त्र प्रहरीलाई आयो भने अलिकति टेरेजस्तो गर्ने, सटर झार्ने, एकछिन पछि फेरि खोल्ने। साह्रै अटेरी। सरहरूले जरिवाना गर्नुभएछ। गर्नैपर्ने थियो।’
जरिवाना तिर्न अटेर गरे सहयोग लिनुपर्ला भनेर बोलाएको प्रहरीको छक्कै पार्ने प्रतिक्रिया नै प्रहरी आफैं पीडित रहेको प्रमाण भयो। अब प्रहरीको मनोबल बढाउन तिनलाई नै अघि सार्नुपर्छ। सम्झाइ-बुझाइ गर्न पठाइएकी महिला प्रहरी भन्छिन्, ‘हामीलाई त खुब अटेरी गर्थ्यौ। सरहरूले जरिवाना गरिसक्नुभयो। अब विकल्प छैन। जरिवाना तिर्ने, नत्र पसल सिल हुन्छ।’
‘पैसा सैसा छैन? कहाँबाट ल्याउनू दस-दस हजार? श्रीमानको फोन नि लाग्दैन। भोलि तिर्छु।’
तिर्नसम्म सहमत भएपछि अब राजेन्द्र सर भन्छन्, ‘यो त अन द स्पट कारबाही हो। भोलि-पर्सि हुँदैन। आजै तिर्नुपर्छ। अहिल्यै तिर्नुपर्छ। श्रीमानको नम्बर दिनुस् मै कुरा गर्छु।’
म उनीहरूमाझ गएर बुझाउन थालेँ, ‘त्यो पसलमा धेरै अखाद्य सामग्री भेटिए। पैसा तिर्नुपर्ने, अखाद्य वस्तु पनि उपभोग गर्नुपर्ने, अनि स्वास्थ्य पनि बिग्रिने हुन्छ। तपाईंहरू नै हो उपभोक्ता, सामान किन्दा सचेत हुनुहोला।’
साहुनी धमाकेदार ‘कमब्याक’ गर्दै सिधै काउन्टरमा ‘इन्ट्री’ गर्छिन्। ‘क्यास’ निकाल्छिन्। केही थान एक हजारका, केही पाँच सयका गरेर दस हजार टेबलमाथि राख्छिन्। फारममा हस्ताक्षर गर्छिन्। जरिवाना रसिदमा हस्ताक्षर गर्न दिँदा महिला प्रहरीलाई भन्दै थिइन्, ‘सबै सामान लगिसक्यो, पैसा नि लग्यो। रसिद के काम? चाहिँदैन।’
पसल हेरियो। जफत गरियो। जरिवाना गरियो। अनुगमन सकियो। जाँदाजाँदै केही कुरा भन्न खोज्दा सुन्न नखोजेपछि लिखित सुझाव दिइयो। साहुनीले पढ्ने काम गर्लिन्-नगर्लिन् थाहा भएन। असल व्यवसायी हो भने पढ्नु पर्नेछ। जानेबेलामा जफत गरेका सामग्री राख्न एउटा बोरा माग्दा भन्छिन्, ‘छैन बोरा सोरा।’
साहुनीको पारा उस्तै। ‘शोले’ फिल्मको ‘अंग्रेजके जमानेका जेलर’ जस्तो सुध्रिने नामै नलिने। विशाल भाइलाई भनेँ, ‘भाइ त्यो रातो क्यारेटमा हाल। पुगेन भने अर्को क्यारेट लेऊ। भोलि फिर्ता ल्याइदिम्ला।’